Kids jecel qalabka. Sidee badan caruurta ku fiican yihiin inay la isticmaalayo iPhone waalidkood 'badan waalidiinta tahay? Iyadoo u kaca ee ay caanka ah ee filimada 3D, waxaa socota in qaar ka mid ah waxaa lagu soo muuqday doonaa YouTube ama gaab ugu yaraan movie in caruurta jeclaan lahaa. Bal aynu eegno 15 videos YouTube sare ee 3D oo aan xiiso leh oo keliya, laakiin waxay sidoo kale in ay sii kids xiiso.
Tani waa ambadeen demo waxa suuragal ah in filimada 3D ah. Waxaa ka mid ah clips talaabo sida yaqaano skateboard ee park qalfoof qabow, iyo Hippos dabaal kalluunka oo dhalaalaysa.
2.Roller Jilidda Siriyalka
Tuur gacmaha kuwa hawada kor! Waa raacid Siriyalka xiiso samaysay by images computer-dhalinta. Tani video YouTube 3D san yahay caruurta iyo caruurta ee wadnaha labadaba.
Shimbir 3.Giant horyaalka
A gorgorka turkey weyn iska duula ee la soo dhaafay camera ah. Waxaa tagged sida shimbir ugu weyn duubay dhaqaaq tartiib ah oo 3D. Kuwii ku caashaqi jiray xoolaha u jeclaan doonaa daawashada baalasheeda weyn sacadda sida idinla yar ka badan kuwii madaxda u ahaa daawadayaal ah.
4.OK Go - White laabatooyinka music video
Maxaa in aan jeclahay oo ku saabsan OK Tag ee videos? Waxay had iyo jeer tahay aragga oo xiiso leh. Tani waxay la mid qoreysa Sargaal koobab oo had iyo jeer u muuqataa in ay diidaan physics, oo eeydu isagoo ah ciyaaryahan markii ugu weyn. Mid ka mid Tani dhab ahaan waa mid ka mid ah ugu wanaagsan videos 3D caruurta.
5.Fun Badda ee 3D - Greece
Haddii aadan qaadan karin safarka qoyska in Europe ah sanadkan, ha YouTube waxa ay kuu keenaan. Tani waxay la jecel video muujinaysaa waxa ay la mid tahay in ay biyo-ski in Greece, oo aad ka heli si aad u aragto in 3D. Waxaa si cad u sheegay in aad dhow biyaha taaban karo.
6.ESPN - OSU vs. USC. Kubada cagta College - saddex daqiiqo oo kubada cagta college oo xiiso leh
Tani movie 3D gaaban waa weyn ee carruurta oo dhan aawadood oo ka mid ah tallaabo iyo reyreyn. Waa la dhimo ee warbaahinta ugu horeysay 3D ESPN orday.
7.Relaxing Magic Forest Video 3D iyo HD
Music jilicsan iyo muuqaal qurux badan captivate doonaa qof kasta. View ayaa si joogta ah u badala, sidaas darteed qofna ma fursad uu ku heli caajisin. Runtii, kanu waa filim 3D ku haboon caruurta, iyaga oo siinaya fursad ay si aad yarayso oo unwind laga bilaabo maalinta.
8.Marine World Kulanka Xiisaha Leh
Muuqaalkan waxaa uu wali isticmaala sawirada iyo video inay soo bandhigto qof walba si quraaradda in Fukuoka, Japan. Hoonbarrooyinka firfircoon oo kala duwan oo qoolley kalluunka badda iyo midabo ku farxi doonaa, oo enchant.
Movie 3D oo macmal ah Funny la nin oo u malaynaayo inuu ogyahay waxa waxa, laakiin cayayaanka leeyihiin hab in dhamaadka. Waxaa jira in ka badan hal milyan oo YouTube ilaa iyo tirinta for this clip gaaban ku dhufan doonto.
Tani filim kartoon waxa aad ku arki yaab waxa computer animation awoodaa. Waxay u eg tahay documentary caalamka ah, laakiin si buuxda u computer ahbaa. Tani movie animation 3D la hubaa inuu captivate.
11.Red haysteen doontooda IMAX trailer
Sannad kasta Australia Christmas Island jiro socdaalka ee magnitude ku dhawaad ​​laga qabanin - malaayiin haysteen doontooda cajiib ah oo cas. Waxay ka yimaadeen xeebta, wadada, oo madax ka baxsan si ay Hiilweyne. Movie The sheegay sheekada u haysteen doontooda ah, iyo this video waa trailer 3D ee filimka.
Tag tani sheegtay in tartanka faras, laakiin tani qurux video dhab ahaantii wuxuu ku saabsan yahay fardo in paddock iyo tartamayaan oo fiiefiican. Kids, gaar ahaan gabdhaha yar, fardo jacaylka iyo this video ma niyad jabin doono.
13.Jay Jay ee Dance Off 3D
Haddii aad u jecel hip hop iyo cayaar waddooyinka, this video waxaa loogu talagalay adiga. Video ayaa runtii yahay xayeysiis u soo xirtaan dharka reer magaalka, laakiin cayaartii kaliya aan la garaaci karaan, iyo in aan ka yarayn 3D.
14.NASA 360-bandhigidda jiir Desert
Madadaalo Tani video 3D yahay oo dhan ku saabsan qalabka loo isticmaalo NASA iyo baaritaano ay cidladii joogeen. Ka helay ilmo yar oo ku riyoonaya inuu noqdo cirmaaxe hal maalin? Tani waa video ah isaga ama iyada.
Video kale oo meel qabow in 3D, trailer, waayo, film IMAX ah oo ku saabsan qorraxda ku dhawri doontaa carruurtaada entranced, gaar ahaan daawashada nalalka Northern cayaaraan 3D.
Ma heli karaa 3D ku filan caruurta aad? Isku day inaad ka Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe !
Waxay kaa caawinaysaa in aad la abuuro gaar ah videos aad 3D si ay ugu dabaal dhan kuwa yar daqiiqado - Christmas, dhalashada, ama xataa maalintii koowaad ee dugsiga.
Wondershare Ka dhigaysa duubey flash ka mid ah sanamyadiinna iyo waxa kale oo gallery sawir sawirada aad ah, sidoo kale. Buuxaan muuqaalada, waxa kale oo aan samayn karo duubey codsiyada ganacsiga. Aad macmiilka cusub caddayn la slideshow ah oo aad la sii daayo socda ee alaabta, ama show kasoo muuqdaan hor iyo ka dib images of haddii masiibo adeegyada nadaafadda. Fursadaha waa dhammaadka lahayn.
Si loo isticmaalo guriga, waxaad samayn kartaa sawirada firfircoon si aad ula wadaagto saaxiibadaa iyo qoyskaaga, iyo si fudud aad iyaga gali kartaa in Twitter iyo Facebook, ama iyaga e-mail qof kasta. Dooro mid ka mid ah in ka badan 120 foom oo kugu caawin kara inaad dhigay aad slideshow - lahayn aqoonta barnaamijyada loo baahan yahay!
Oo xataa badan oo muhiim ah laga yaabee, oo dhan marto kuwa waa lacag la'aan. Qaar ka mid ah waxaa lagu agaasimo duluc gooni ah, sida aroosyada, ilmaha cusub, ama Christmas, halka kuwa kalena ay yihiin generic. Waxaa jira xitaa ka badan 30 foom oo 3D si dhab woxogaa la cayaarto sawiradaada. Haddii aad tahay khaa'in, in hab wanaagsan, waxaad samayn kartaa adiga oo template gaar ah la qalab naqshadeeye si aad qortid kartaa design u gaar ah. Waxaa jira kala guurka xiiso leh oo aad ka mid noqon kara, qoraalka waxaad ku dari kartaa, oo aad hyperlinks gelin kara. Ma doonaysaa in aad ku darto music? Waxaad samayn kartaa in, sidoo kale.
Software waa fududahay in la isticmaalo, sidoo kale, la interface ah dareen iyo feature Falanqeynta ah si aad u aragto waxa aad alaabta la dhammeeyayna ay eegi doonaan sida ka hor waxaa la daabacay. Haddii aad riixi kartaa, jiididda, iyo hoos u dhac, waxaad isticmaali kartaa Wondershare!
Sidaas daraaddeed waxaa aad u leedahay - xagaaga ka buuxo oo xiiso leh 3D! Haddii aad rabto in aad adiga ku gaar ah ama daawado qof abuurista kale ah wuxuu isu keenay, waa in aad. Waxaa laga yaabaa inaad la waxyoonay doonaa mid ka mid ah videos ee kor ku xusan oo adiga iyo ilmahaagu aad u tegi kartaa qaadan images kuu gaar ah iyo in la abuuro kuu gaar ah movie 3D gaar ah, u diyaar ah in ay la wadaagaan on YouTube. Bal yaa og - waxaa laga yaabaa in aad la Waxyoon James Cameron oo ah jiilka soo socda!
Sida loo sameeyo Video ah oo yar yar
> Resource > Video > Top 15 YouTube 3D Videos for Kids